कर्पोरेट नेपाल , ३ माघ २०७६, शुक्रबार, ०४:४७ pm
विश्व बैंकको सहयोगमा तयार भएको उक्त सफ्टवेयरको बारेमा शुक्रबार मन्त्रालयको सभाहलमा खानेपानी मन्त्री बिना मगर समक्ष जानकारी गराईयो । एनवास नाम दिईएको उक्त सफ्टवेयर प्रणाली मार्फत देशैभरिका आयोजनाहरुको डिजिटल तथ्यांक, सर्भे गर्ने व्यक्ति, सम्बन्धित खानेपानी योजनाको मुहान, रिजर्भवायर ट्याङ्की र पाइप लाइनहरुको अवस्था साथै उपभोक्ता समितिहरुका बारेमा विस्तृत जानकारी लगायतका सूचनाहरु दिईने मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर डा. रजित ओझाले जानकारी गराए ।
सफ्टवेयर बारे जानकारी गराउँदै डा. ओझाले भने, “कुनै आयोजनाको संरचना खोलाले बगाएको छ कि छैन ? रिजर्भवायर ट्याङ्की, पाइप लाइनहरुको अवस्था कस्तो छ ? कति उपभोक्ताले खानेपानी खाईरहेका छन् ? कति ठाउँमा खानेपानी पुगेको छैन ? सबै कुराको यथार्थ वस्तुस्थिति जानकारी यो सफ्टवेयरबाट थाहा हुन्छ ।”
उनले जोड दिंदै भने, “त्यसैगरी खानेपानी सुविधा नपुगेको वा पहुँच बाहिरका उपभोक्ताहरुका लागि पनि सफ्टवेयरमा अनरिच पपुलेसन भनेर राखेका छौं । सफ्टवेयरको माध्यमबाट खानेपानीमा पहुँच नभएका जनसंख्याको तथ्यांक आएपछि खानेपानीको पहुँच नभएका क्षेत्रको पहिचान हुनेछ । जसका कारण भोलिका दिनमा योजना छनौट गर्न सजिलो हुनेछ । जहाँ खानेपानीको पहुँच छैन, त्यो ठाउँमा योजना छनौट गर्न सजिलो हुनेछ । यसरी खानेपानीको पहुँच बाहिरका जनतालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सफल हुनेछौं ।”
सफ्टवेयरको प्रस्तुति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री मगरले नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट देशैभरिको खानेपानीको अवस्थाका बारे थाहा हुने भएपछि यसले खानेपानीका योजना बनाउन सहयोग गर्ने बताइन् । ‘अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले योजना माग्न आईरहनुहुन्छ । कुन ठाउँमा खानेपानी आयोजनाको आवश्यकता छ कुन ठाउँमा छैन भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुने भएकाले अब मन्त्रालयलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’ उनले भने, ‘खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा नयाँ टेक्नोलोजीका माध्यमबाट काम गर्न सहज हुने भएकाले अब योजना छनौट गर्न सजिलो हुने भएको छ ।’
पर्वतमा तेइस वर्षपछि खानेपानी आयोजना सम्पन्न
खानेपानीको व्यस्थापन गर्दै आएका उपभोक्ता समिति समस्यामा, स्थानीय सरकारको बेवास्ता
पोखरामा दोश्रो मेलम्चीः ३ अर्ब ९४ करोड खर्चेर दैनिक ४ करोड लिटर शुद्ध खानेपानी
भक्तपुरको सिपाडोलमा एक लाख ३० हजार लिटर क्षमताको खानेपानी ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न